31/08/2019 Thu Yay 0
ပြင်ဦးလွင်တွင် စကေဘာဖြင့် (၃) ချက်အထိုးခံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းထန်မှုတွေကြား ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် ၁။ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းထန်ထန် အကုသိုလ်လှိူင်းကတစ်ပြန် မိမိသည် တပ်မတော်မှ ရာထူးအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း ခံရမည့်သင်တန်းအား နောက်တစ်နေ့တွင် မသွားရောက်မီ ၂၅.၄.၂၀၁၈ ည၁၀နာရီအချိန်၌ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ…. ဓမ္မသဟာယ စင်တာတွင် တရားပွဲချီးမြှင့်နေသော ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ Continuous reading
နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုတ်ကွေး ဒီဆေးနဲ့ ကောင်းသွားတယ် …..
နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုတ်ကွေး ဒီဆေးနဲ့ ကောင်းသွားတယ် ….. ဆင်တုတ်ကွေးဖြစ်တာ ဒီဆေးနဲ့ ကောင်းကြတယ်တဲ့.. အရမ်းပျော်တာပဲ … နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်နာကျင်ရတဲ့ဝေဒနာတွေပြေးပြီလေ.. အိပ်ရာထတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဘဝတူ ခံစားနေရသူတွေကိုဝမ်းသာအားရ သတင်းပေးရသေးတယ်… မနေ့က facebook မှာ post တစ်ခုတွေ့တယ် … ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်နာကျင်ကိုက်ခဲခံစားနေရသူတွေ Continuous reading
ဒီလို သတင်းအမှားတွေ မရေးသင့် ပါဘူးဗျာ…လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သတင်းအမှန်က
ဒီလို သတင်းအမှားတွေ မရေးသင့် ပါဘူးဗျာ…လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သတင်းအမှန်က လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သေဒဏ်ပေးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို ထိုင်းဘုရင်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးလိုက်ပြီဆိုပြီး သတင်းတွေ ဖြန့်ဝေနေကြတယ်။ ဒီသတင်းက သတင်းအမှားပါ။ ထိုင်းဘာသာနဲ့ ရေးထားတာက ထိုင်းမှာရှိတဲ့ တောဆင်ရိုင်းတွေကိစ္စကို ရေးသားထားတာ။ မြန်မာတွေ အောက်တန်းကျတယ်။ ယုတ်မာတယ်။ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီလောက်အထိတော့ မယုတ်မာသင့်ဘူးလို့ Continuous reading
အိမ်မှာနေတဲ့ ဇနီးသည် ရဲ့ ဘဝကို CCTV တပ်ပြီးမှ သိခဲ့ရတဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရဲ့ အဖြစ် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူ အများစုဟာ အိမ်ရှင်မ ဖြစ်တဲ့ မိန်းမကို အထင်မကြီးကြသူတွေ များပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်အထင်မှာ… ယောင်္ကျားလုပ်သူက အပြင်မှာ နေပူ (သို့) Continuous reading
၄၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မနက်စောစောလေးမှာ သံဃာတော်များကိုအာရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
၄၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မနက်စောစောလေးမှာ သံဃာတော်များကိုအာရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော စိုးမြတ်သူဇာဟာဆိုရင် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်အင်အားနဲ့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မကြီးစိုးလို့ အများကချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြပြီး စိုးမြတ်သူဇာရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းကို ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပါနော်။ စိုးမြတ်သူဇာကတော့ ညီမတွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ စန္ဒီမြင့်လွင် စိုးပြည့်သဇင်တို့ကိုလည်း အနုပညာအလုပ်ကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပြီး အကြံဉာဏ်တွေလည်း ပေးပါတယ်နော်။ စိုးမြတ်သူဇာက မောင်နှမတွေအပေါ်မှာ Continuous reading
” တရုတ်နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်အသတ်ခံရမှု မြန်မာနိုင်ငံသား (၇) ဦးကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ”
30/08/2019 Thu Yay 0
” တရုတ်နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်အသတ်ခံရမှု မြန်မာနိုင်ငံသား (၇) ဦးကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ” ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ရမ်ကန်ဟန် ၃၉ လမ်းမှာဖွင့် လစ်ထတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ဆူကွမာလ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း၇ှင် ချန်ရိဟန် (၅၁)နှစ်ကို….. ပူးပေါင်း သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးသုံးဦး Continuous reading
(၂၁)ကီလိုမီတာအဝေးက သခင်စွန့်ပစ်ခဲ့ရာနေရာကို သွားပြီး၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ခွေးလေး
(၂၁)ကီလိုမီတာအဝေးက သခင်စွန့်ပစ်ခဲ့ရာနေရာကို သွားပြီး၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ခွေးလေး ခွေးလေးတွေ မွေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က မမွေးနိုင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် မမွေးတာ အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကို လပ်ကီးလေးက သက်သေပြနေပါတယ်။ သခင်ဟောင်းကိုပြန်တွေ့ရဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်တောင် လမ်းလျှောက်ဖို့မလွယ်တဲ့ အကွာအဝေးကို ပြန်သွားခဲ့တဲ့ ခွေးလေးပါ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ပြောပြခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်အသစ်ဖြစ်သူက သူတို့ဟာ ခွေးလေးကို Continuous reading
နည်းပညာခေတ်ရဲ့ သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး
30/08/2019 Yan Naing 0
နည်းပညာခေတ်ရဲ့ သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အရင်ခေတ်က လူတွေဟာ စာလေးတစောင် ကိုယ့်ဆီရောက်လာဖို့ ရက်သတ္တတပတ်လောက် အနည်းဆုံး စောင့်ခဲ့ပါတယ် ။ Digital ခေတ်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Digital ပစ္စည်းတွေဟာ လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရာတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အချစ်ကိစ္စတွေကအစ အလုပ်ကိစ္စတွေအဆုံး အားလုံးကို Continuous reading
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်အတွက် မြန်မာHacking အဖွဲ့တွေ ပါဝင်ကူညီတော့မယ် ဝင်းနဲ့ဇော်လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်ကို တရားခံဖြစ်ကြောင်း သတ်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ လေးနှစ်ကြာဖမ်းစီးထားပြီးနောက် ယနေ့နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းအစိုးရကပယ်ချကာ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်…. စတင်ဖမ်းစီးခံရစဉ်ထဲက အစိုးရရော မီဒီယာများပါ ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက် မတရားတဲ့ ပစ်ဒဏ်တွေအတွက် ဖော်ပြခြင်း ကာစီးပေးခြင်း ကာကွယ်ပေးခြင်း လုံလောက်စွာမရှိခဲ့ပါဖူး…. Continuous reading
This Year : 89068
Total Hits : 1239043